ACADEMIE NATIONALE DES SPORTS : Mpampianatra EPS iray ho an’ ny mpianatra 5600 - Journal Madagascar
Raha ny tokony ho izy mpampianatra iray ho an’ny mpianatra 30. Noho tsy fahampian’ny mpampianatra fanatanjahantena eny anivon’ny sekolim-panjakana dia nanapa-kevitra ny ministeran’ny tanora sy ny fanatanjahantena ny hampiofana mpampianatra EPS (Education Physique et Sportive). Nivoaka tamin’ny fomba ofisialy ny 29 janoary 2021 teny amin’ny Académie Nationale des Sports (ANS) Ampefiloha ny andiany Mendrika. 156 ny isan’ireto mpampianatra nanaraka fiofanana nandritra roa taona teo anivon’ny ANS ireto. Tamin’ny alalan’ny fifaninanana no nahafahan’izy ireo nisitraka izany fiofanana izany.
Araka ny fanazavan’ny Tale jeneralin’ny ANS, Jean Claude fa tsy ampy ny mpampianatra EPS. “Mpampianatra iray ho an’ ny ankizy 5600. Raha ny tokony ho izy anefa dia mpampianatra iray ho an’ny 30”, hoy izy. Nambaran’i Jean Claude fa taranjam-mpampianarana sy taranjam-panabeazana ny EPS. “ Sady manabe ny olom-pirenena, manabe amin’ny lafiny ara-batana, ara-tsaina, ara-piarahamonina”, hoy hatrany izy. Ho voaray mpiasam-panjakana ary hiasa avy hatrany eny amin’nysekoly ambaratonga faharoa (CEG) izy 156 mianadahy ireto. Araka ny fanazavan’ny Sekretera Jeneralin’ny ministeran’ny tanora sy ny fanatanjahantena, Ralaivao Lovatiako Michel fa ho arahin’ny ANS maso ireto andiany voalohany ireto.